ကံကောင်းချင်ရင် ဘုရားရှိခိုးဖို့ မပျင်းကြပါနဲ့ - Online Bunner
ကံကောင်းချင်ရင် ဘုရားရှိခိုးဖို့ မပျင်းကြပါနဲ့
August 25, 2019 Online Bunner ဘာသာရေး 0
ကံကောင်းချင်ရင် ဘုရားရှိခိုးဖို့ မပျင်းပါနဲ့
ဘုရားရှိခိုး မပျင်းနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတဲ့ အလုပ် မဟုတ်ဘူး တစ်နေ့လုံးသုံးဖို့ စိတ်တန်ခိုး ထုတ်လုပ်တာ စိတ် ဓါတ်ဆီ ထည့်တာ စိတ် စက်ဆီ ဖြည့်တာ။သန့်စင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်အောင် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရေနဲ့ ဆေးတယ်လို့မှတ် စက်ကရိယာတွေကို ဆေးကြောသန့်စင်တယ်လို့ စိတ်ထဲ မှာ နှလုံးသွင်း ထား။ဘုရားရှိခိုး တာ ဘုရား ဂုဏ်တော် ပွားတာ မေတ္တာပို့ တာ ထွက်လေဝင်လေ စူးစိုက်ပြီးမှ ငါးမိနစ် ဆယ်မိနစ် တရားထိုင် တာဟာ ကျန်းမာရေး လဲရ စိတ်ခွန်အား လဲကောင်းစိတ်ကြံခိုင်ရေး လဲတိုးတယ် ကိုယ်ခန္ဓာ ခွန်အား တိုးတက် ကိုယ်ခန္ဓာ ကြံခိုင်ရေး လဲတိုးတက် အကုန်လုံး အကောင်းတွေချည်းပါပဲ။
ဘုရားရှိခိုး ပူဇော်ရသောအကျိုး ရှစ်မျိုး
၁။ သွားလေ ရာရာ ရောက်လေရာ အရပ် ၁၀ မျက်နှာ တို့ ၌ အပူဇော်
အချီးမြှောက် ကို ခံရခြင်း ။
၂။ သွက်သွက်လက်လက်နှင့်ထက်မြတ်သော ဥာဏ်ပညာ ကိုရရှိ ခြင်း ။
၃။ ကိုယ့် အလိုလိုက်ပြီး ကိုယ့် အကြိုက်ကိုသာ လုပ်ကိုင်ပေးကြသောအခြွေအရံ ပရိသတ်နှင့် ပြည့်စုံရ ခြင်း။
၄။ မရေ မတွက်နိုင်သော စည်းစိမ် ချမ်းသာနှင့် ပြည့်စုံ ခြင်း။
၅။ ဘဝ တိုင်း ဘဝ တိုင်း အဆင်း ရုပ်ရည် လှပ ခြင်း။
၆။ ကိုယ်လှ စိတ်လှ အတွင်းအပြင် လှပ သည့် အတွက် အများ ၏နှစ်သက်ခြင်း ကို ခံယူရခြင်း ။
၇။ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း တို့ ၏ချစ်ခင်ရိုသေလေးစားမှု ခိုင်မြဲ ခြင်း။
၈။ ကောင်းမြတ်သော သီတင်းကျော်စော ပျံ့ နှံ့ ခြင်း။်
ဤ ၈ ပါးသော အကျိုး တို့ ကို ဆုတောင်း ပတ္တနာ မပြုရဘဲ
ဆုမတောင်း ရဘဲ ပြည့်စုံ ရသည်ဟု( တိဿ ရဏ ဂမနိယတ္ထေရ အပါဒါန် ) ပါဠိတော်မှာ လာသည်။
ယုံယုံကြည်ကြည်နှင့် နေ့ စဉ် မှန်မှန်
ကြိုးစား ၍ ရှိခိုးကြပါ၊ ပူဇော်ကြ ပါ၊
မပျင်းကြနဲ့နော်credit-Original Upload Ashinvasava
ကံကောငျးခငျြရငျ ဘုရားရှိခိုးဖို့ မပငျြးပါနဲ့
ဘုရားရှိခိုး မပငျြးနဲ့ အခြိနျဖွုနျးတဲ့ အလုပျ မဟုတျဘူး တဈနလေုံ့းသုံးဖို့ စိတျတနျခိုး ထုတျလုပျတာ စိတျ ဓါတျဆီ ထညျ့တာ စိတျ စကျဆီ ဖွညျ့တာ။သနျ့စငျတဲ့ စိတျဖွဈအောငျ ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျးတှကေို ရနေဲ့ ဆေးတယျလို့မှတျ စကျကရိယာတှကေို ဆေးကွောသနျ့စငျတယျလို့ စိတျထဲ မှာ နှလုံးသှငျး ထား။ဘုရားရှိခိုး တာ ဘုရား ဂုဏျတျော ပှားတာ မတ်ေတာပို့ တာ ထှကျလဝေငျလေ စူးစိုကျပွီးမှ ငါးမိနဈ ဆယျမိနဈ တရားထိုငျ တာဟာ ကနျြးမာရေး လဲရ စိတျခှနျအား လဲကောငျးစိတျကွံခိုငျရေး လဲတိုးတယျ ကိုယျခန်ဓာ ခှနျအား တိုးတကျ ကိုယျခန်ဓာ ကွံခိုငျရေး လဲတိုးတကျ အကုနျလုံး အကောငျးတှခေညျြးပါပဲ။
ဘုရားရှိခိုး ပူဇျောရသောအကြိုး ရှဈမြိုး
၁။ သှားလေ ရာရာ ရောကျလရော အရပျ ၁၀ မကျြနှာ တို့ ၌ အပူဇျေျာ
အခြီးမွှောကျ ကို ခံရခွငျး ။
၂။ သှကျသှကျလကျလကျနှငျ့ထကျမွတျသော ဉာဏျပညာ ကိုရရှိ ခွငျး ။
၃။ ကိုယျ့ အလိုလိုကျပွီး ကိုယျ့ အကွိုကျကိုသာ လုပျကိုငျပေးကွသောအခွှအေရံ ပရိသတျနှငျ့ ပွညျ့စုံရ ခွငျး။
၄။ မရေ မတှကျနိုငျသော စညျးစိမျ ခမျြးသာနှငျ့ ပွညျ့စုံ ခွငျး။
၅။ ဘဝ တိုငျး ဘဝ တိုငျး အဆငျး ရုပျရညျ လှပ ခွငျး။
၆။ ကိုယျလှ စိတျလှ အတှငျးအပွငျ လှပ သညျ့ အတှကျ အမြား ၏နှဈသကျခွငျး ကို ခံယူရခွငျး ။
၇။ မိတျဆှေ အပေါငျးအသငျး တို့ ၏ခဈြခငျရိုသလေေးစားမှု ခိုငျမွဲ ခွငျး။
၈။ ကောငျးမွတျသော သီတငျးကြျောစော ပြံ့ နှံ့ ခွငျး။ျ
ဤ ၈ ပါးသော အကြိုး တို့ ကို ဆုတောငျး ပတ်တနာ မပွုရဘဲ
ဆုမတောငျး ရဘဲ ပွညျ့စုံ ရသညျဟု( တိဿ ရဏ ဂမနိယတ်ထရေ အပါဒါနျ ) ပါဠိတျောမှာ လာသညျ။
ယုံယုံကွညျကွညျနှငျ့ နေ့ စဉျ မှနျမှနျ
ကွိုးစား ၍ ရှိခိုးကွပါ၊ ပူဇျောကွ ပါ၊
မပငျြးကွနဲ့နျေျာcredit-Original Upload Ashinvasava
သင့်ရဲ့ လက်မှာ X သင်္ကေတ ပါနေသူလေးများ ဖတ်ရန်အတွက်
မျက်နှာအသားအရေ ကြည်လင်နေစေဖို့ ကြက်ဥအကာနဲ့ ပေါင်းတင်နည်း
စက်တင်ဘာတွင် မုန်တိုင်း(၂) ကြိမ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့် ရာသီဥတုခြေနေမိုးဇလ ထုတ်ပြန်…
မနေ့ကလည်း ငိုခဲ့ပြီးပြီ” ဒီနေ့လည်း ငိုခဲ့ပြီးပြီ မနက်ဖြန်ကစပြီး ရယ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ
ရည်းစားမရှိသော မိန်းကလေးအတွက် အားသာချက်များ…
နေကြာစေ့စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးများ (၁၀)မျိုး
အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးတဲ့အခါ နေ့နံမတူလို့ စိတ်ညစ်နေသူများ ဖတ်ကျိလိုက်ပါ
ONLINE BUNNER provide celebrity, life style, breaking news, local news and international news. Articles are displayed in text, video and photos. Visitors can read news in articles type of categories in https://onlinebunner.com/ (example – News, Entertainment, Sport, Health, Celebrities, Media & Music….etc). Hope our visitors enjoy our website.